Manarintsoa – Nitsangana ny trano famakiam-boky « Pause Boky »
Publié janvier 7, 2019 par Book News
Tafatsangana ny volana desambra teo ny trano famakiam-boky “Pause Boky” ao Manarintsoa Afovoany. Tanjona amin’izany ny fampitomboana ny fahaizana ananan’ny ankizy sy ny tanora sy ny fitarihana ny sainy mba hisokatra amin’ny alalan’ny famakiana boky.
Trano famakiam-boky « Pause Boky »
“Tanteraka ny nofinofinay. Tafatsangana ihany ny “bibliothèque de quartier” voalohany. Isaoranay avokoa ireo rehetra nandray anjara tamin’ny fanatanterahana ity tetikasa ity ary averinay hatrany ny antso amin’ny fanampiana amin’ny fametrahana trano famakiam-boky any amin’ireo faritra hafa. Ny fanavaozana ny firenena dia miainga amin’ny fanabeazana, ary mila mandray anjara amin’izany ny tanorantsika. »*
Izay no filazana nalefan’ny fikambanana Tsimanavaka, ny 23 desambra lasa teo, tamin’ny pejy Facebook-n’izy ireo. Sady nankalaza ny Noely ihany koa moa ny fikambanana tamin’io andro io.
Notokanana ny 22 desambra 2018 teo mantsy ny trano famakiam-boky mitondra ny anarana hoe “Pause Boky”, tao Manarintsoa Afovoany. Antony nananganana ity trano ity ny mba ahafahan’ny ankizy miala sasatra, manome lanja indray ny boky ary manana indray ilay kolontsaina mamaky boky, izay efa somary very ankehitriny noho ny firoboroboan’ny aterineto sy ny teknolojia.
Nisokatra ny volana desambra teo ny trano famakiam-boky « Pause Boky » ao Manarintsoa.
cc: Association Tsimanavaka
Boky miisa 1 000 eo ho eo, fianarana, “roman”, angano, tantara, sns… no hita ao amin’ity trano famakiam-boky ity. Tsara ny manamarika fa ny boky rehetra voaray dia azo avy amin’ny tolo-tanan’ireo olona tsara sitrapo.
Afaka manao famakiana ao an-toerana na “lecture sur place” ireo maniry hanao izany.
Ankoatra izay, misy ny “club de lecture”, ny “club de langue” ary ny efitrano fianarana ao amin’ity trano ity. Ireo ankizy sy tanora manodidina ny 6 ka hatramin’ny 30 taona moa no afaka mandray anjara amin’ireo hetsika rehetra atao ao amin’ity trano famakiam-boky ity.
Mivoha amin’ny 8 ora ka hatramin’ny 11 ora ny maraina ary amin’ny 2 ora ka hatramin’ny 5 ora ny hariva ny toerana. Mbola mandray fanampiana hatrany moa ireo tompon’andraikitra, ary mbola mitady mpirotsaka an-tsitrapo sy “animateur de bibliothèque”.
Sady nitokana ny trano famakiam-boky no nankalaza ny Noely ny fikambanana Tsimanavaka, niaraka tamin’ireo sampana sy mpilatsaka an-tsitrapo samihafa.
Ny Corsair international, ny Aeropartage, ny Antilin’ny Madagasikara sy olona tsara sitrapo maro dia nanampy betsaka tamin’ny fanatanterahana ity tetikasa ity.
Ny fikambanana Tsimanavaka dia niorina tamin’ny taona 2003. Tanora maniry ny hitondra ny anjara birikiny amin’ny fanatsarana ny fiarahamonina avokoa no mivondrona ao amin’izy io. Ny fampandrosoana maharitra amin’ny alalan’ny fanabeazana sy ny fiadiana amin’ny herisetra mahazo
Publié dans Actualités, Malagasy et Social